Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Eziikwii nke Minerva gbasara nku ya": Martin Vrijland
Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Eziikwii nke Minerva gbasara nku ya"
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 21 March 2019	• 34 Comments
isi iyi: youtube.com
N'okwu mmalite nke okwu mmeri ya n'abalị ikpeazụ, Thierry Baudet kwuru n'abalị gara aga:Ogwu owuru Minerva gbasara nku ya n'abali". Okwu mkparịta ụka ahụ nwetara otutu oge ugbu a anya na nkatọ, mana mmadụ ole na ole nwere ike ịhụ okpukpu abụọ na okwu a maka ihe ọ bara uru. Ezigbo owl Minerva nke Baudet kwuru banyere ya bụ: ikwiikwii nke ofufe Freemasons; Moloch. Ndị freemasons (okpokoro isi na ọkpụkpụ, ndị obodo Thüle, wdg) gbasara nku ha na Netherlands.
Egwuregwu nke Hegelian dialectics na-apụta n'ihu gị. Ozi zoro ezo bụ na ụlọ Leiden Minerva na-achịkwa. Baudet, nwa eze Ụlọ akwụkwọ Clingendael, na-egosi ezi ọdịdị ya zoro ezo na anya. Ndị dọkịta na-ahụ anya nke Clingendael etinyewo mmegide ha na-achịkwa aka na nchịkwa nke onye kwuo uche ya nke mmegide nwere ike ịfụ ogwe aka nri n'aka ekpe ruo ebe dị elu. (gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Thierry Baudet nwere ike ịkọ ihe niile nnukwu nchịkọta data gosipụtara na e nwere ndụ n'etiti ndị mmadụ. O nwedịrị ike ịgba ya ume, n'ihi na nri gafee Europe na gburugburu West ga-eto. Ọ bụ usoro ihe ịga nke ọma na Hegelian. Asụsụ nke abụọ mmegide nke na-emepụta ihe dị ugbu a: mmegiderịta na-eduga nchịkọta chọrọ, ọ bụ ezie na onye ọkà ihe ọmụma bụ Hegel. Ọ bụ ya mere Baudet nwere ike iji kpọọ Mark Rutte akụ na ụba:
"Ndị mahadum, ndị nta akụkọ, ndị na-enweta ọrụ enyemaka anyị na ndị na-ewu ụlọ anyị, na-akụda anyị, ma karịa ihe niile ndị ọchịchị anyị na-emebi. A clique nke networks; nzukọ ndị ọkachamara; ndị na-agụtụbeghị akwụkwọ na ndụ ha ma amaghị ihe okwu ndị dị mkpa dị ogologo. N'ụzọ dị mwute, ha na-achịkwa ndị na-eme mkpebi nke mba anyị ma na-eme nhọrọ na-ezighi ezi oge na oge ọzọ n'ọchịchị dị omimi nke amaghị ama na mmasị onwe onye na-atụgharị uche. "
Ọ bụghị ogologo oge! Ya mere, ọ gara n'ihu, ya mere ndị mmadụ na-eche na ogige nkuzi ahụ ga-emeri ma kpatara nnukwu mgbanwe.
Anyị maara na ịrị elu a si n'aka ndị ọzọ Europe na ọbụna United States, ebe a pụkwara ịchọta Donald Trump n'okpuru ogige ahụ. Anyị maara ya site n'ogige Brexit. Anyị maara ya site n'Ịtali na ọtụtụ mba ndị ọzọ dị na Europe. A na-etinye okporo osisi batrị ahụ na nnukwu volta. Otú ọ dị, ọ bụ nkwadebe maka okwu na-abịanụ, ebe a ga-ejikọta ikike ahụ na ọdachi akụ na ụba na nke mmadụ na-echere West.
Akwụsịghị Brexit nke m buru amụma ogologo oge na ọdịda nke akụnụba America ga-ejikọta na nke a (onye mmegide a na-achịkwa) bụ akụkụ dị mma nke aka nri. Ọ bụ ya mere site na imewe na ikike nwere ike imeri ugbu a, n'ihi na ọ na-eme ka e nwee ike ịchọta ya nke ga - eme ka ọgba aghara wee nwee ike 'iwu ọhụrụ'. A ga-ejikọta akụkụ ndị agha na-ejikọta ụwa ọnụ na ebe a na-aga agha na-emegide EU na nsogbu ọdachi akụ na ụba na-egosi na nso nso. Ọgba aghara nke ga - emepụta na - enye ike ikike maka ogwe aka ọhụrụ ahụ. Nke a na-enye ike ike maka maka (nke dị ogologo oge) na Turkey na Turkey na Alaeze Ukwu Ottoman naghachi. Ọ ga - eduga ná nhazi ikpeazụ na ndị na - eche echiche dị egwu; site n'ịkpọ ha na-agba izu ndị na-eche echiche. Dị ka ndị na-akpata ọgba aghara ahụ, a ga-amachibido ụdị nkatọ ọ bụla ma nwee nanị 1 eziokwu na nke ahụ bụ eziokwu nke ogwe aka dị ike ga-eweta.
Thierry nwere ike ịta ụta na ọpụpụ na ọ nwere ike Utrecht ọgụ Oru igwu egwu na ọnọdụ. Nakwa na nke ahụ, anyị na-amata ihu ọma nke Masonic pawn (Minerva Clingendael descendant) Baudet. Dịkwa ka ọ na-eme mgbe nile n'egwuregwu nke mmegide a na-achịkwa, a na-egwuri egwu ma na-emegharị. Mgbe a na-etinye voltaji na ogwe ndị na-emegide, ihe ọkụkụ na-eme ka ukwuu. Anyị na-akpọ nzọpụta ugbu a, ma gị onwe gị bụ onye nhoputa ndi ochichi na-eche na a na-akpọ ọchịchị onye kwuo uche ya. Elitaire Clingendael Minerva pawn Baudet nwere ike ijide ma mee ka ndị mmadụ nwee mmetụta ọhụrụ. Ọ bụrụhaala na ndị mmadụ na-agba ọsọ mgbe ọkwọ ụgbọala na-esote ndị ọzọ, a na-ebubo batrị ahụ karia. Mgbe ahụ, nnwere onwe ahụ nwere ike ịgbaso; ọbịbịa na-abịanụ. Site na ọgba aghara a na - abanye iwu ohuru a, a ga - akpokwa ya: "O nweghi mgbe ozo!". Ọ bụ usoro nke na-agbasa n'ebe nile dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ma nke a nwere ike inyere gị aka ịmata edemede edemede. Gụọ ihe niile gbasara edemede edemede ahụ isiokwu a.
Anyị na-ahụ nkwadebe maka ọgba aghara na Europe; Turkey na-abịanụ (Ordo ab Chao), ọbịbịa nke alaeze ndị America na (mgbe nke ahụ gasịrị, na okwu okwu) agha ụwa nke atọ maka Jerusalem. Otú ọ dị, n'oge ahụ, otu akụkụ nke ndị mmadụ na-ebi ndụ ọsọ ọsọ. Eziokwu ụgha maka Baudet pawn. Oge eruola ka ị hụ ihe egwuregwu Hegelian na ịmara ndị omekome ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka onye ha bụ n'ezie. Naanị ị nwere ike ikpughe ha. Ị daa ụgbụ maka pawn nchekwa? Ndi nwere ike inyere aka ime ka ndi mmadu ghara ime ka ha di nma? Ị daa maka nrọ nke ọchịchị onye kwuo uche ya; ndị ezinụlọ eze Clingendael na Minerva na-achụ.
Gụọkwa ihe ndị dị n'okpuru isiokwu a
Henk Otten na ọpụpụ na Forum for Democracy (Fvd) bụ nke a pụrụ ịkọwapụta
Ntakịrị banyere nkwekọrịta Marrakesh: Kutzooi!
Nnukwu ngosi megide Thierry Baudet na-abịa
Nhoputa ndi ochichi nke Europe na netiwu nchekwa nchekwa nke FvD ('ugha site na ihe omuma nke ndi si mba ozo)
Tags: Baudet, Nje, ochichi onye kwuo uche, agba, Forum, FvD, ulo akwukwo, lang, meer, Minerva, ọ bụghị, mmeri, okwu mmeri, okwu, Thierry, okwu, ikwiikwii, n'ihi na
21 March 2019 na 10: 34
Naanị ogwu ikwiikwii ka na-akwado usoro nke ugbu a ...
... ma nọgide na-ezochi anya n'okpuru nku nke mama na papa.
21 March 2019 na 12: 10
Enwere m ike ihie na Minerva = Moloch, mana, anyị na-ekwu okwu banyere òtù nzuzo nzuzo na ikwiikwii Minerva bụ ihe dị mkpa (dịka Baudet maara). O doro anya na Baudet sitere na Minerva na Clingendael kwusiri ike.
juanperro1979 dere, sị:
24 March 2019 na 10: 14
Owl zoro ezo n'anya
21 March 2019 na 12: 27
Nnukwu ikwiikwii nke na-ahụ ehi bụ nke a, yana iji zọpụta ya na ịzụ ahịa gị kwa ụbọchị.
21 March 2019 na 16: 02
Banyere agbanwe ihu nke Mr de Owl:
21 March 2019 na 17: 36
@ De Wage ohu, ezigbo ibe! M na-echeta na m gụrụ isiokwu a na mbụ na saịtị a n'okpuru ụdị pseudonym.
"Ihe ịrịba ama na akara na-achị ụwa, ọ bụghị okwu ma ọ bụ iwu."
21 March 2019 na 12: 29
Na ebe a ezigbo nkọwa mere ..
21 March 2019 na 12: 41
'Nnukwu mmeri nke Nzuko maka ochichi onye kwuo uche ya na-egosi na onye nzuko ajuju'
..yes na nkwenye ahụ ugbu a mara mma nke ọma
21 March 2019 na 12: 35
Enweghị ihe ọzọ ị ga-agbakwunye, agbachara m ihe nrịbama m.
Enwere m ihe oriri ọzọ maka onyinye a, Mr. Vrijland.
Mkpagbu na Ịhụnanya.
21 March 2019 na 13: 44
A na-akpọ owl ndị na-eto eto "chickl chicks"! n'oge usoro "imi" Holleeder enyela ọkàikpe ahụ ákwà mkpuchi! ndị nwere ezigbo ikike na Netherlands, m na-atụ egwu nke ahụ?
21 March 2019 na 13: 46
Ihe edere nke ọma. Ihe m chere banyere ya. Baudet bụ 100% na-achịkwa mmegide, o nwere ike itinye ọkọlọtọ na Wilders. Ezigbo ọhịa na-aga. Baudet bụ otu maka onye ga-achọ inwe ọrụ nke Vvd. Rutte enwetawo nnukwu uru site na ihe mere na Utrecht, nke dị jụụ. Ị nwere ike jikọta ihe niile na-acha ndụ ndụ na ndị ọrụ obodo, jupụta n'akpa aka nri ... nri ziri ezi. Na ezumike na India ma na kaadị akwụmụgwọ na mkpuchi. Ihe niile dị otu. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ndị nwere ọtụtụ ndị ka ukwuu ma ya mere, ya mere, 'ga-arụkọ ọrụ' na anddren. Ya mere, ndị ọzọ niile na-akwado iwu. Nke ahụ bụ ebumnuche.
A na-akwalite Freemasonry na-ahụ anya n'ihu gị. Ọ dị mma, ndị ohu anaghị enweta ya.
21 March 2019 na 15: 16
Mark Twain - "Ọ bụrụ na ntuli aka mere ihe ọ bụla, ha agaghị ekwe ka anyị mee ya."
na nke ahụ bụ otú ọ bụ 😀
21 March 2019 na 16: 35
... Achọghị m ịkụ onwe m, ma ọ na-egosi na enwere mmekọrịta n'etiti ihe a na-akpọ ọgụ na Utrecht na ntuli aka. Ọ bụ ihe niile dị ịtụnanya ..
Dị ka nke a orchestrated ibe n'etiti ndị uweojii na Turkish ukara dị tupu ntuli aka ... Erdogan thx! 🙂
21 March 2019 na 16: 39
.. N'ihi ile ọbịa nke Freemason Masonry na Bilderberger .. Nwoke ahụ nọ n'aka nri nke Slabdullah bụ De Jong onye nwere ike ịkpọzi ya Deputy Prime Minister, ọzọkwa ọ bụ obere ụlọ ịgba chaa chaa.
21 March 2019 na 17: 06
Nke a bụ 100% kwetara n'etiti Netherlands na Turkey. Nnukwu mgbasa ozi pụtara na e debere ya, zubere maka ndị Turks na ndị Dutch bụ ndị dara maka ya. Ọ dị mfe ilekọta atụrụ ahụ. Ha na-ajụ maka ya.
21 March 2019 na 19: 31
Ndi oru NATO na mpụ, anyị ga-asị KUCH 😀
21 March 2019 na 16: 59
Ọfọn, akpụkpọ anụ a na-enyo enyo bụ ndị na-enyo enyo na-ejide ọnọdụ dị elu. Agaghị m akọwa nke a na nkọwa ndị ha bụ.
21 March 2019 na 17: 08
..holleeder adịghị eme ka m chịa otu onye ahụ nke tinyere aka na ihe a na-akpọ Heineken na ihe Peter OM Regelneef de Vries zipụrụ kpamkpam na aha ya na-enweghị isi ma ọ bụ na anyị agbahapụghị ha mgbe a na-agwụ atụrụ ahụ mgbe ahụ, anyị na-ewepụ akpụkpọ anụ ahụ dị na igbe ochie ahụ na Pita kụrụ mmiri ara ehi.
21 March 2019 na 18: 45
Oge ma ọ bụ isiokwu ma eleghị anya ma a maara n'ezie otú ndị uweojii si achọpụta ebe Heineken na onye ọkwọ ụgbọala ya kpochibidoro?
Nke a emebeghị ka m doo anya. Mystery?
21 March 2019 na 17: 53
ma biko mee BỤGHỊ gụọ mmeghachi omume n'okpuru akwụkwọ akụkọ a na-ekwu okwu 🙂:
21 March 2019 na 20: 31
na-agwọ ọrịa ọrịa Hegel ....
"Onye ọkà ihe ọmụma Germany
Okwu ah u Baudet ji mee ihe yiri ka o si kwuo na onye Germany bu onye ihe omimi Hegel. O dere, sị: "Eziikwii nke Minerva adịghị amalite ịgba ọsọ ruo ụtụtụ." Hegel pụtara na ndị mmadụ na-ahụ ma ọ bụ ghọta ihe omume mgbe ọ fọrọ nke nta. "
ị ga-ahụ ya ozugbo ị ghọtara ụzọ
21 March 2019 na 20: 34
Ihe kariri Baudet egosiputa na obu ihe ndi ozo na imata ihe eji egwu egwu.
Na mgbakwunye, RTL ga-eji aha a iji nweta ọchụchọ Google nke na-asọga n'ebe nrụọrụ weebụ Martin Vrijland.
21 March 2019 na 21: 21
eziokwu ahụ bụ na ngwá ọrụ ọkachamara baudet nwere ihe ndị a na-ekwu na nke a dị na igwefoto n'ihu bọmbụ ntụrụndụ na mgbasa ozi a na-achịkwa. egosi ihe abuo, buru ibu na ojiji nke ojiji kpuchiri ya na nke abuo na o kwenyesiri ike na 70% -80% nke umu anumanu n'ime oke ohia ahuhughi oke ohia maka osisi ... n'ihi na n'ala nke onye kpuru ìsì bụ otu anya mgbe eze niile gasịrị
21 March 2019 na 21: 22
Pecies.. na enwe obi ụtọ, a ga-egwu egwu n'abalị a mgbe ị na-aṅụ biya na ibe
21 March 2019 na 22: 32
Ekwesiri m ikwenye na ya, ọ dịghị ekwe ka ahịhịa too ya
Baudet: "Ndị mmadụ ga-echebe anyị" na-ebibi anyị "
21 March 2019 na 20: 57
M ghọtara na Baudet kwuru okwu abụọ iji mee ihe dị ka onye na-eme nchọpụta na South Holland, Wiegel na Paul Scheffer. Ọ dịghị ndị na-ama jijiji na-ele anya na hs doro anya na mmadụ abụọ ahụ apụghị ịla ezumike nká. Ị nwere ike ịhụ na ọ bụ mgbe niile otu.
Olileanya na n'ezie onye ọ bụla na-ele npo. N'ịbụ ndị zuru ezu na-atụ anya obi anyị na-atụ egwu. Gbanwee? n'ezie ha apụghịdị ime ihe. Nanị jiri nri Mayonezi nye ndị ohu. Ọ ghaghị ịnọgide na-atọ ụtọ. N'ihe gbasara nchegbu m ... ihe ọṅụṅụ
22 March 2019 na 07: 29
Echere m na njikọ ya na ikwiikwii nke Minerva na Moloch dịtụ anya.
Ma n'agbanyeghi eziokwu bu na Baudet kwenyesiri ike, enwere m uche, otu ihe kpatara ya bu mkpa Baudet.
Nke ahụ bụ ịdọba ndị mmadụ aka na ntụrụndụ ntuli aka.
Ndị ọkachamara dị ka a ga-asị na ndị mmadụ ga-ahụ na ntinye ntuli aka enweghị isi ma ọlị n'ihi na a ka na-akwa ha.
Ozugbo ndị mmadụ na-eteta na eziokwu a ma na-abanye na 'akara', ike ha malitere ịda.
Iji nweta ndị mmadụ na ntuli aka, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aghaghị ịkwado ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ.
N'etiti ndị na-eme mkpọtụ ị chọrọ Thierry Baudet.
N'ezie, ndị ọkachamara anaghị achọ ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpuchie ihu igwe ha ma kwụsị mbata ọhụụ, ma nke ahụ nwere ike ịbụ na ịchụ àjà.
Baudet kwuru na ọ chọrọ iweghachite obi ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ugbu a, ọ ghaghị ịga nke ọma.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe dị mkpa (maka ndị ọkachamara).
22 March 2019 na 07: 31
"Kansụl nke State kwuru na akụkọ ya kwa afọ na inwe obi ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme mkpọtụ ma na-arụ ọrụ na-emebi ọchịchị onye kwuo uche ya."
M na-agụ na 2017 n'akwụkwọ Volkskrant.
22 March 2019 na 09: 28
Ebumnuche bụ na ị pịa bọtịnụ n'okpuru okwu ahụ bụ Moloch na mgbe ahụ, ị ​​bịa na vidio na ikwu okwu nke m ga-akọwa.
22 March 2019 na 13: 25
Ihe na-aga n'ihu na 20 March
Pịa njikọ ahụ, arụmụka na Media na 2018 na tebụl RTLshow
Lee okwu ole na ole ma mgbe ahụ na Bekee
22 March 2019 na 17: 59
@Martin, ị ghaghị ịgụ isiokwu AD a. Ọ na-agụ dị ka nkọwa na isiokwu a gụnyere nkọwa .. Mgbaghara
Ogo nke ikwiikwii dị ka onye ọkà ihe ọmụma anọgidere kemgbe ahụ. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla Mr. M. de Uil na Fabeltjeskrant bụ ọkachamara maara ihe niile.
Ihe Hegel - nakwa Baudet - bu n'uche: nghọta ga - abịa mgbe ihe si na ihe pụta ìhè. O yiri ka Cruyffian 'ị ga-ahụ mgbe ị ghọtara'. Ya mere, Baudet si na ihe ndi ozo putara, 'onodu ihu igwe', ihe ndi o chere na obu ego buru ibu, ebe obu na anya ya, ha enwegh ike.
Ihe dị mwute ...
22 March 2019 na 18: 18
Kpọmkwem, ahụrụ m ya n'abalị ikpeazụ, mana enweghị oge iji rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ m ọzọ.
Ha gụrụ ya wee hụ na ọtụtụ iri puku ndị mmadụ na-akwụsị na ebe nrụọrụ weebụ m n'ihi na ha na-aga ịchọpụta nkwupụta ahụ site na Baudet, n'ihi ya, ha ga-eme ka m kwụsị na nsonaazụ Google.
Ọ bụ nnukwu egwuregwu a na-egwu egwu, ha na-atụkwa ụjọ na ndị mmadụ ga-ebili. M na-eme ya n'onwe m na mgbasa ozi nwere ọtụtụ nde (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ijeri) na ha nwere mgbasa ozi ọzọ a na-achịkwa na ha nwere otu ndị agha nke mgbasa ozi ọha na eze na ha nwere netwọk ha na Inoffizieller Mitarbeiter na ha nwere AIVD nke na-eme ihe ma mara (ma na-achịkwa ya niile) .. na na!
22 March 2019 na 19: 51
Media / Macht na-enye Baudet otu ihe ngosi
Mgbasa ozi naanị gosiri 1! ntinye foto na Mediapark na otu puku igwe foto na otu puku igwe eserese n'otu ogige ntụrụndụ, nanị foto 1 ma ọ bụ abụọ ọ bụla
22 March 2019 na 21: 32
A gburu Pim Fortuyn mgbe ọ dị afọ iri na otu na 6 / 5 maka 6: 05 nke 5 bullets, 6 shells hụrụ n'akụkụ ya ma e nwere ihe gbasara 5 si n'aka ndị uweojii 6 ahụ.
6 + 5 = 11 na 6 × 5 = 30
Na mgbakwunye na mmadụ iri na otu anyị na-ezute ọtụtụ mgbe # nkwụsị # # extrelowfrequenty # # dualism # # ELeven #
nke a pụtara iwepụta oge buru ibu maka ya ma ha emeela ya. A na-ejikwa ụdị ahụ iji nye ndị mmadụ ihe ha chọrọ n'ụzọ dị njọ.
" Ndị nwụrụ anwụ nke ọgụ na Utrecht na-egosi n'ezie na ọ pụghị ịbụ Onye Okike?
Nnukwu ngosi megide Thierry Baudet na-abịa »
Nleta nile: 11.692.150